ချစ်သူနဲ့တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် …..
June 18, 2019 Cele Love 0
ချစ်သူနဲ့တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ….. အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိနေသူလေးကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ယနေ့ထက်တိုင် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ယှဉ်လို့ရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းသူလေးပါ။ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့်သူ့ရဲ့သူ့ပုံရိပ်တိုင်းကပရိသတ်တွေသာမကအနုပညာရှင်တွေကြားမှာပါထင်ဟပ်စေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။ သူမကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမယ့်လည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဝန်းရံနေနရင်းနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်နေရတာပါ။အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းမပြတ်တမ်းကြိုးစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအပေါ်လည်းဂရုစိုက်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းကပဲ လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းတစ်ခုကိုဝေမျှခဲ့ ပါ တယ် …။ ဒါကတော့ […]
မာနခဲ O သွေးလေးတွေရဲ့ လူတွေမသိတဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်များ
မာနခဲ O သွေးလေးတွေရဲ့ လူတွေမသိတဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်များ အိုသွေးလေးတွေဟာ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး မာနကိုလည်း လုံးဝအထိခိုက်မခံချင်တဲ့သူတွေပါ။ အိုသွေးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်လေးတွေကို နားလည်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် …… (၁) အိုသွေးလေးတွေဟာ အချစ်ကြီးသလို အမျက်လည်းကြီးတယ်။ သစ္စာဖောက်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့။ ဘယ်တော့မှ ပြန်လှည့်ကြည့်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး …။ (၂) […]
ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်
ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင် ဘိုးတော်​တစ်ယောက် ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးကလူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက်က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြ လေသည် …။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲ ဒေါသတွေ ထွက်လာပြီး … `ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ? ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် …. မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ ?´´ […]
တစ်သက်မှာတစ် ခါ ဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်…
တစ်သက်မှာတစ် ခါ ဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်… တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြှော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါကံထူးလို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့.ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား […]
မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားဖို့ အလုံခြုံစိတ်ချရဆုံးနိုင်ငံများ ….
မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားဖို့ အလုံခြုံစိတ်ချရဆုံးနိုင်ငံများ …. မိန်းကလေးတွေအတွက် တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ဆိုတာ အရမ်းစွန့်စားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံအများစုကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးက နေ့ညမရွေးဖြစ်နေတာကြောင့် တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ပူပင်စရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ အွန်လိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ worldpackers မှာ တွေ့ရှိရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ အလုံခြုံဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို […]
” သမီး လောကထဲတွင်ဆက်ရှိနေပါက ဖေကြီးနှင့်မေကြီး ပိုက်ဆံပိုကုန်မည်” ဟု စာရေးခဲ့ကာ ၉ တန်းကျောင်းသူ ကြိုးဆွဲချသတ်သေ
” သမီး လောကထဲတွင်ဆက်ရှိနေပါက ဖေကြီးနှင့်မေကြီး ပိုက်ဆံပိုကုန်မည်” ဟု စာရေးခဲ့ကာ ၉ တန်းကျောင်းသူ ကြိုးဆွဲချသတ်သေ တောင်ငူ၊ ဇွန် ၁၈(သတင်းတမန်) ” သမီး လောကထဲတွင် ဆက်ရှိနေပါက ဖေကြီးနှင့်မေကြီး ပိုက်ဆံပိုကုန်မည်” ဟု စာရေးခဲ့ကာ ၉ တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိုးဆွဲချသတ်သေမှု […]
တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားများ တပ်မက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ…..
တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားများ တပ်မက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ….. ဆေးပညာ အမြင်အရ တင်ပါး ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တခြား အမျိုးသမီးတွေထက် ဉာဏ်ရည်ထက် မြတ်ပြီး၊ သားကောင်းမိခင် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုတယ် လို့ ဆိုပါတယ် …။ဒါ့အပြင် ယောက်ျားတွေကို စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ရာ မှာလည်း […]
ကလေးအဖေ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ ခုလိုဖြစ်အောင် ထပ်မလုပ်ပါနဲ့နော် ခင်ဗျား သိပ်ရက်စက်တယ် ….
ကလေးအဖေ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ ခုလိုဖြစ်အောင် ထပ်မလုပ်ပါနဲ့နော် ခင်ဗျား သိပ်ရက်စက်တယ် …. ကလေး အဖေ – ခင်ဗျား ရက်စက်တယ် ခင် ဗျား သွေးသားလေး ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်တာဝန်မယူဘူး- မွေးဖွားလာတဲ့အခါ အနားမှာ ရပ်တည်မပေးဘူး – ခုကလေးနဲ့ သူ့ အမေ ဒုက္ခရောက်နေတယ်ခင်ဗျား ဘာမှ […]
အဆီကျစေရန် သောက်သုံးနေကြတဲ့ ဂျင်းနှင့် သံပုရာဆေးပေါင်းရည်တွင် အသည်းပျက်စီးနိုင်သည့် အာနိသင်တွေ့ရှိ…
အဆီကျစေရန် သောက်သုံးနေကြတဲ့ ဂျင်းနှင့် သံပုရာဆေးပေါင်းရည်တွင် အသည်းပျက်စီးနိုင်သည့် အာနိသင်တွေ့ရှိ… ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီကျစေရန် သောက်သုံးလျက်ရှိသည့် ချင်း(ဂျင်း)နှင့် သံပုရာဆေးပေါင်းရည်တွင် အသည်းနှင့် နှလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် အာနိသင်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ ညီညီဝင်းက ပြောကြားသည်။ “ဒီဆေးရည်က တကယ်ကို အဆီကျစေတဲ့ အာနိသင် ရှိ၊ […]
“မပ တ်သတ် မိခင် မှာ လူရှုပ်လူပွေ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို ပျိုမေတို့ သိရှိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀) ချက်”
“မပ တ်သတ် မိခင် မှာ လူရှုပ်လူပွေ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို ပျိုမေတို့ သိရှိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀) ချက်” ကိုယ်ရွေးချယ် မယ့်သူ သို့မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို ပျိုမေတို့ စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ရည်းစားများတဲ့ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်မိရင် ပထမဆုံးထိခိုက်နစ်နာရမှာက ပျိုမေတို့ဖြစ်ပြီးတော့ […]